हवाईजहाजको माइलेज कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं, कार्तिक २७ । आकाशमा हवाईजहाज देख्दा मानिसहरुमा एक नयाँ किसिमको सोच आउने गर्छ । यस्तोमा आकाशमा उडिरहेको हवाईजहाज देख्दा विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु उठ्नु स्वाभाविक हो ।
तर तपाइँले कहिल्यै सोच्नुभएको छ – हवाईजहाजले कति माइलेज दिन्छ होला ? एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार हवाईजहाजले प्रतिसेकेण्ड करिब ४ लिटर इन्धन खर्च गर्ने गर्छन् । बोइङ ७४७ ले आफ्नो एक मिनेटको यात्रामा २४० लिटर इन्धन खपत गर्ने गर्छ । यो विवरणलाई आधार मान्ने हो भने हवाईजहाजको माइलेज शून्य दशमलव ८ किलोमिटर हुनजान्छ । यो विमानले १२ घण्टाको यात्राको क्रममा १ लाख ७२ हजार लिटर इन्धन खपत गर्ने गर्छ।
याे पनि पढ्नुस फरार रहेका एभरेष्ट होटलका संचालक लारी पक्राउ
बोइङको एक वेबसाइटमा एक ग्यालेन अर्थात् करिब ४ लिटर प्रतिसेकेण्डको दरले इन्धन खपत हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । वेबसाइटमा १० घण्टाको उडानमा ३६ हजार ग्यालेन अर्थात् एक लाख ५० हजार लिटर इन्धनको खपत हुने गरेको छ ।
बोइङ ७४७ मा एक किलोमिटरमा १२ लिटर इन्धन खर्च हुने गर्छ । यसको अर्थ ५ सय यात्रीहरु १२ लिटर इन्धनमा करिब १ किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छन् । जसअनुसार एक किलोमिटरमा प्रतिव्यक्ति ०.०२४ लिटर इन्धन खर्च हुने गरेको छ । एक सय किलोमिटरको यात्रामा प्रतिव्यक्ति २.४ लिटरमात्र खर्च हुने गरेको छ । -एजेन्सी
याे पनि पढ्नुस वायुको प्रभावका कारण कति क्षेत्रमा वर्षा र हिमपात पर्ने सम्भावना